mahardevi | Mahar Devi
Posted August 7, 2018 August 7, 2018 mahardeviLeaveacommentPosted in Well-Being4U
Posted August 3, 2018 August 3, 2018 mahardeviLeaveacommentPosted in Uncategorized
Posted May 24, 2018 August 3, 2018 mahardeviLeaveacommentPosted in Teenager and Parent Well Being4U
ဆယ်ကျော်သက်များ၊မိဘများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဗဟုသုတများ၊ လိုက်နာဖွယ်ရာများ၊ သိမှတ်ဖွယ်ရာအကြောင်းအရာများကို Teen Health Myanmar Facebook Page တွင် တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Youtube Channel တွင်ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ Please follow and like us:
Posted May 21, 2018 August 3, 2018 mahardeviLeaveacommentPosted in Healthy Spout & Happy Family Well Being4U
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်ရှင်၊ မိသားစုများ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်၊ ဂရုပြုရမည့်အချက်များ၊ အကြံပြုချက်များ၊သိမှတ်ဖွယ်အကြောင်းအရာများကို Sexovit Forte Myanamar Facebook Page တွင် အပတ်စဉ် တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Youtube Channel တွင်ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ “ကူးစက်ခံရတာမဟုတ်တဲ့ ရောဂါဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ”(“Well-Being4U” Episode SF-13) “နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ”(“Well-Being4U” Episode SF-12) “အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ကြုံရတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာ”(“Well-Being4U” Episode SF-11) “သိထားသင့်တဲ့ အဖြစ်များသော ဆီးချို သွေးချို ရောဂါ”(“Well-Being4U” Episode SF-10) […]
Posted May 21, 2018 August 3, 2018 mahardevi1 CommentPosted in Doctor's Beauty Tips WellBeing4U
အလှအပ၊ ဆံပင် အသားအရေ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်၊ ဂရုပြုရမည့်အချက်များ၊ အကြံပြုချက်များ၊ သိမှတ်ဖွယ်အကြောင်းအရာများကို Beauty Tips Myanmar တွင် တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Youtube Channel တွင်ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ “နေရာင်ခြည်(ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်) နဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ…ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ”(“Well-Being4U” Episode NP-13) “Antioxident ဆိုတာဘာလဲ”(“Well-Being4U” Episode AG-13) “Nutraceutical ဆိုတာဘာလဲ”(“Well-Being4U” Episode NP-12) “အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေပါသော အလှကုန်တွေသုံးရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ”(“Well-Being4U” Episode AG-12) တင်းတိတ် ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ၊ ဘယ်လိုကုသ ကာကွယ်နိုင်လဲ(“Well-Being4U” Episode […]
Posted May 18, 2018 August 3, 2018 mahardeviLeaveacommentPosted in Baby & Parent WellBeing4U
ကလေးငယ်ရှိတဲ့မိသားစုတိုင်းအတွက် ဗဟုသုတများ၊ လိုက်နာဖွယ်ရာများ၊ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ ကို Baby Tips Myanmar Facebook Page တွင် တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။့ Youtube Channel တွင်ကြည့်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ ကလေးငယ်တွေမှာအဖြစ်များသော သတိထားရမည့် အနာစက်ရောဂါ(“Well-Being4U” Episode BvD-12) “ကလေးငယ်နဲ့ လူကိုအကျိုးပြုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားများ”(“Well-Being4U” Episode BvD-11) “ကလေးများအရွယ်အလိုက် ဥာဏ်ကောင်းအောင် ဘယ်လိုပြုစုရမလဲ”(“Well-Being4U” Episode BvD-10) “ကလေးမိဘများ သတိပြုဆင်ခြင်ဖွယ်”(“Well-Being4U” Episode BvD-9) ကလေးငယ်တွေ အကြောင်းမဲ့ငိုတတ်တာပုံမှန်ပဲလား? ဘယ်လိုလုပ်ပေးသင့်လဲ? “(“Well-Being4U” Episode BvD-8) […]
Posted January 31, 2018 January 31, 2018 mahardeviLeaveacommentPosted in Children's Health, Health Categories
Vitamin C 1000 mg Effervescent 20’s Tablets (Orange, Lemon Flavour) (UK)
Posted January 23, 2018 February 1, 2018 mahardeviLeaveacommentPosted in Effervescent, Health Categories, HealthAid All Products, Vitamins & Minerals
Vitamin C 1000mg Effervescent Tablets – HealthAid Effervescent Vitamin C 1000mg Tablets are dissolvable refreshing, fruit flavoured tablets which make up intoadrink containingafull gram of Vitamin C inareadily absorbable form. This product provides an alternative way of taking supplements especially for those who have difficulty in swallowing tablets. What Are Vitamin […]
Folic Acid 400 µg Tablets (UK)
Posted January 23, 2018 February 8, 2018 mahardeviLeaveacommentPosted in Health Categories, HealthAid All Products, Men's Health, Vitamins & Minerals, Women's Health
Folic Acid Tablets – HealthAid Folic Acid isamember of the B group of vitamins and is used in the body for the production of nucleic acids and DNA. It helps in the utilisation of sugar, amino acids and the division of body cells. What Are Folic Acid Tablets For? Folic acid is known […]
A to Z Active Multivit Effervescent 20’s Tablets (UK)
A to Z Active Effervescent Tablets – HealthAid A to Z Active Effervescent Tablets areacomprehensive formula that is cleverly balanced by our nutritionists to help keep you feeling 100%. It contains the essential Vitamins and Minerals that are recommended onadaily basis. Vitamin A, stimulates the productionand activity of white blood cells, […]